Welcome to baidoanews.com | Tacsiyo Qaran oo loo Dirayo inta wax fahmeysa ee Qowmiyada DM
Wednesday January 11, 2017 - 17:27:56 in Wararka by Baidoanews Webmaster
waxaan ugu tacsiyadeyneynaa guud ahaan umadaan ku abtirsata DM inta aan sheegad aheyn oo u dhalatay Qowmiyada DM dhibaatadii uu hormuudka ka ahaa ama aabaha u ahaa Mr. Jawaarey oo afkiisa horey ugu qirtay inuu dirac gashan jirey kaasoo hada mar kale guud ahaan Dirac bug ah u wado dadka DM laakiin aysan marnaba qaadan doonin.
Daneyste Jawaarey iyo kooxo xildoon maangaab ah oo boos kasoo waayey dowlada KG ayaa waxay wadaan dirac qafiif ah oo ay rabaan in DM ugeliyaan laakiin marnaba ma dhici doonto in diracaas rag uu kamid yahay Proff. shariif iyo intii la xal maasha aan gashan doonin ayaa waxaa dadka qaar moodaan in kooxda duqa waayeelka diraca u xiran uu guul gaarey laakiin guusha waa tan aanu gaarney ee ah in aanu siku soo sharaxno maseerka waxa ay doonayaan raga asaageena ah.
waxaa hubaal ah in guusha ay soo dhowdahay mardhowna aanu gaari doono hadii rabi raali ka ahaado, waxaanu ugu baaqenaa inta samaha jecel xaq doonka ah aanu marnaba ka dhaadhicin in la guul dareystay Guushu ay dhowdahay miraheeduna guran doonaan .
waxaan mahad gaar ah udireynaa Geesiga libaaxa shariif hassan ah waxaanu leenahay marnaba ha raja dhigin cayaar waa gelinka dambe waxaanu leenahay deg deg waa in loosoo buuxiyaa boosaska ragii dowlada KG ka baxay isla markaana il gaar ah lagu fiiriyo kooxaxa sunta dabada kuwata ee kujira Baarlamaanka KGS, sidoo kale mahad gaar ah geesiga garaadka dheer Dr. amaandhoorey iyo guud ahaan taageeriyaasha Hogaanka dalka inuu noqdo geeiga libaxa Shariif Xasan ah.